Amaqembu azophikisana ngokungamethembi umengameli Zuma ePhalamende | News24
Amaqembu azophikisana ngokungamethembi umengameli Zuma ePhalamende
Cape Town – Amaqembu ezepolitiki azophinde aphikisane ngesiphakamiso sokungamethembi uMengameli wezwe, uJacob Zuma, ePhalamende ngoLwesine.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi iDemocratic Alliance (DA) ibhalele uSomlomo wePhalamende, uBaleka Mbete, icela ukuba kuphikiswane ngalesi siphakamiso.
Leli qembu belilokhu linxenxa i-African National Congress (ANC) ukuthi ilalele ikhwela lalaba abafuna uZuma ashenxe esikhundleni.
OLUNYE UDABA: Umengameli Zuma ushiye angalazi kulabo abagxeka i-ANC
“Isithombe saZuma senkohlakalo, ukungaphathi kahle ngokwezomnotho kanye namanga angeke kusaqhubeka eduze nomsebenzi wokwakha iNingizimu Afrika engcono yawo wonke umuntu,” kusho umholi weDA, uMmusi Maimane.
Kodwa-ke i-ANC ePhalamende ithi ngeke ize iseseke lesi siphakamiso sokuba kuketulwe umengameli Zuma.
Leli qembu likhala ngokuthi lokhu sekuwumkhuba ojwayelekile we-DA onezinhloso zepotiliki futhi ongenaso isisekelo.
“Kusukela ekuqaleni kwaleli hlandla lePhalamende, elineminyaka engaphezu kwemibili ubudala, sekwenziwe iziphakamiso eziyisikhombisa seziphelele ngamaqembu aphikisayo,” kusho i-ANC esitatimendeni ebesivela eHhovisi laSotswebhu wayo, uJackson Mthembu.
UMthembu usanda kuthola okukhulu ukugxekwa, ikakhulukazi ezinhlakeni ze-ANC eziseka uZuma, kulandela isiphakamiso asenza sokuthi kusule isigungu esiphezulu kuleli qembu, okuhlanganisa nomengameli Zuma.